Amina Muuse Weheliye
Indhahaaga ku soo arag horuumarka wadanka
bandhiga aamina 28 07 13
nalafiidso 03 07 13
BANGI HADAAN LAHAAN LAA ( GEERAAR CUSUB) Dareenka dadka waa kala duwan yahay, qaar baa sida ugu fiican ooy wax u gudbin karaan ay tahay in ay maansoodaan, qaarka kalena hadalka ayeey ku kalsooni qabaan, in kastoo mihnadeyda shaqo ay tahay hadal oon warbaahinta ku jiray muddo dheer hadana markeey timaado, dareen dhab ah oo laabteyda ka soo go'ay waxaan ku kalsoonahay in aan ku gudbiyo MAANSO halkaan HADAL uun kaga ekeysan lahaa.
Geeraarkaan soo socda waxaa igu dhaliyey markaan arkay sida dadka dunidu qaarkood u dulman yihiin, saboolnimo badankeed dad abuur ahna ay u heysato, waxaan soo xasuustay sida dadkeyga soomaaliyeed ugu gaamureen faqrinomo iyo gaajo iyagoo leh dal dihan oo barwaaqo badan lagala soo bixi karo, waxaan ka ciishooday isdaan u jeclaan lahaa in xaladaha dadkeygu badalmaan.
Maansada soo socota waxaan ku sharaxayaa waxa baahida dadkeygu tahay iyo sida haboon ee wax looga qaban kari lahaa haddii dhaqaale loo heysto.
Waxaan geeraarkaan u hibeeyey dhamaanba dadka saboolka ah ee dunida, ooy ugu horeeyaan dadkeeyga soomaaliyeed.
BANGI HADAAN LAHAAN LAA!!!
Waxaa qortay Amina Mussa Wehelie.
WAX HASTOOY U BAAHDAAN,
Foojignaan: Saxaafadu waa u fasaxan tahay in eey daabacdo geeraarkaan, waase haddii eey xuseyso magaca qoraha oo ah mu'alifka maansadan.
1. waxaa aan asaayda sartay kuna dhawaaqay ololaha hangasha 1-dii Agoosto 2010-ka. 2. Wax badan ayaa qabsoomay, gudaha iyo dibadaba, ololaha oo ah sidiisaba olole nabadeed oo dadka nabada iyo wadaniyadda lagu baraarujinayo iyadoo loo maraayo warbaahinta tan iyo maalintaas waxaan wax kasta oon sameynayo xitaa shaqadeyda caadiga ah aan ku saleeyey hadafka iyo ujeedooyinka ololaha, waxaan aasaasay barnaamij ololaha hoos yimaada oo la yiraado bandhigga Amina iyo Nala Fiidso labadaba.
3. Haween badan oo badankood u nool Muqdisho ayaa ila saartay asaayda welina ila wada taasoo muujinaysa inuu barnaamijku taaba galay. 4. Xafalado uma sameeyo ololaha iyo sanadguurooyinkiisa waxaana u arkaa in aaney habooneyn in qarash lagu bixiyo xus uun, lakiin waxaan ku xusnaa warbaahinta dhexdeeda, 5. Waxan soo socda furista iskuulo lagu barto wadaniyadda, dhaqanka iyo luuqadda soomaliga oon lagu caawinaayo dhalinyarrada, iskuulka ugu horeeya waxaa dhowaan laga furayaa Muqdisho, iyadoo la kaashanaayo jaamacadaha waaweyn. 6. Qurbaha wax weyn ayaa laga qabtay wadamo koobana waxaan ku leenahay wakiilo, ma ahan olole joogsanaayo goor dhow, dadku waxey ku daaleen in ay i weydiiyaan goormee asaayda dhigeysaa, xitaa waxaa i weydiiyay siyaasiyiin waaweyn oo dalka maamul iyo xilal sare ka haya, waxaase ii muuqata in aan weli la gaarin hadafkii aan markii hore u qaaday, umma qaadin oo qur ah in Muqdisho hagaagto ama gobol gaar ah hagaago, waxaanse u qaaday in dadkeygu kulligood ay nabad helaan kuna barbaarujiyo in nabad la helo la'aanteed aanay nolol jiraynin, ololaha hangasha waa soconayaa mana istaagayo ilaa tuulada ugu dambeysa ee Soomaaliya ay nabad hesho dadkeyguna isku duubni ,midnimo iyo xasillooni helaan.
7. Waxaan asaayda saartay 10 sano markii aan qurbaha ku noolaa oon ka shaqeynaayey warbaahinta maalin kastana aan ku soo toosaayey dhimashada dadkeyga, iyo baab'ooda, waxeeyna ila noqotay in aanan ka sii aamusi Karin dhibta wadankeyga oo magaceyga iyo xirfadeyda u adeegsado sidaan uga shaqeyn lahaa inay dadkeygu helaan nabad waarta iyo dowladnimo.
Waxey ahayd 1dii bishii Agoust ee sanadkii 2010ka markii aan go'aansaday in aan ASAY QARAN ( MARA CAD) qaado, si aan dadkeyga soomaliyeed iyo dunida inteeda kaleba ugu baraarujiyo, in wadankeygu nabadgelyo u baahan yahay, si dhibaatada ah uga baxaan dadkeygu, halkudhigeyguna wuxuu ahaa INTA NABADI DHALANEYSO, AMA AAN KA DHIMANAAYO DHIGI MAAYO ASAAYDA!!!
Raisuwlasaaraha xilligaan ee dowladda ku-meel gaarka ah ee Soomaliya, Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) ayaa mar aan kula kulmay Istanbul sanadkan ayaa igula kaftamay in bisha Agoust ee sanadkaan la iga dhigo doono ASAAYDA qaran, balse waxaan ku iri : (Waa haddii ay dhacdo sidaan ku dhigi lahaa) hadaba, hadda waxaa su'aashu tahay ma dhaceysaa sidaasi???
Ma filaayo in howluhu dhowdhow yihiin, balse waxaan ku rajo weynahay in maalin uun wadankeyga oo dhami hagaagi doono, nabadgelyo taam ahna ay heli doonaan dadkeyga dhamaantiis, anigana wax karkarbo ah iguma heyso nafteydu, waxaanse iga go'an in aan hamigeyga ka miro dhaliyo, inteey doonto ha igu qaadatee .
Aasaasaha Ololaha HANGASHA.
Ku soo dhowoow, Amina Mussa Wehelie Blog
Kala soco halkaan dhadhaaqyada iyo arrimaha ay ka shaqeyneyso, Amina Mussa Wehelie, suxufiyad Soomaliyeed oo ku nool the Great Britian. waxaad halkaan ka dheehan kartaa dhamaanba qoraalladda, sawirada, maansada, riwaayadaha, iyo arrimaha ay walaashiin Amina idiin soo gudbineeyso.Marka ku soo dhowaada, AminaSahra.blogspot.com
Halkaan kala soco dhaqdhaqaaqyada OLOLAHA HANGASHA
Waa bil cusub, iyo howl cusub, howlwadeenada OLOLAHA HANGASHA, waxeey si weyn ugu mashquulsan yihiin, sidii ay uga mira dhalin lahaayeen, hadfka iyo ujeedada OLOLAHA.
Bil kasta waxeey ku dhawaaqayaan, wixii u qabsoomay bishii hore, iyo waxa la qabanayo bisha cusub ee bilaabatay.
Halkan kala soco hadaba kulli howlaha OLOLAHA HANGASHA.